कुखुरा पहिला जन्मियो कि अन्डा ? क्वान्टम फिजिक्सले दियो जवाफ - Saptakoshionline
कुखुरा पहिला जन्मियो कि अन्डा ? क्वान्टम फिजिक्सले दियो जवाफ
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २९, २०७७ समय: १०:२९:१४
पहिला अन्डा आयो कि कुखुरा ? यस विषयमा प्राचीन समयदेखि नै बहस सुरु भएको थियाे, तर पनि यसमा कसैको एकमत भने थिएन ।सदियौँदेखि यस सवालले वैज्ञानिक तथा दर्शनशास्त्रीहरूको दिमाग घुमाइरहेको थियो ।
अब तपाईं भन्नुस् कि यी दुईमध्ये कुन पहिला आयो ?
तपाईं अन्डा पहिला आयो भन्नुहोला, तर सवाल यो आउँछ कि अन्डा कसले दियो त ?
कुखुरा नै थिएन भने अन्डा कहाँबाट आयो ? यदि कुखुरा पहिला आएको भए अन्डाविना कसरी जन्मियो त ?
यस विषयमा सवाल–जवाफ यसरी नै हुँदै आइरहेको थियो ।
तपाईं दिमाग घुमाउन थाल्नुहुन्छ, सोच्न र तर्क गर्न थाल्नुहुन्छ, तर पनि तपार्इंलाई यस सवालको जवाफ मिल्न सक्दैन । तर, अब अस्ट्रेलियाको क्विसल्यान्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिक तथा फ्रान्सको एनइईएल संस्थाले यस सवालको सत्य–तथ्य पत्ता लगाएको दाबी गरेको छ । क्वान्टम फिजिक्सका अनुसार अन्डा तथा कुखुरा दुवै पहिला आएका थिए ।
क्विसल्यान्ड युनिभर्सिटीमा एआरसी सेन्टर अफ एक्सेलेन्स फर क्वान्टम इन्जिनियरिङ सिस्टमका भौतिक वैज्ञानिक ज्याकी रोमेरोले क्वान्टम मेकानिक्सको अर्थ यो हुन्छ कि केही कुरा नियमित क्रमविना पनि उत्पत्ति हुन सक्छ । उनी भन्छन्– हाम्रो खोजअनुसर दुवै वस्तु पहिला हुन सक्छन्, यसलाई अनिश्चित कारणको क्रम मान्न सकिन्छ । यो हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि हुन्छ । तर, हामीले यसलाई महसुस गर्न सकेका हुँदैनौँ ।
प्रयोगशालामा यसको प्रभाव देख्नका लागि अनुसन्धानकर्ताले ‘फोटोनिक क्वान्टम स्विच’ नामको एक सिक्वेन्सको प्रयोग गरेका थिए ।क्वान्टम स्विचसँग अनुसन्धानमा कन्ट्रोल भनिने दुई घटनाक्रम निर्भर रहेको रोमेरो बताउँछन् । उदाहरणका लागि कप्युटरको बिट्सलाई लिन सकिन्छ । जसको मान ० वा १ हुन्छ । यो अनुसन्धानमा यदि कन्ट्रोलको मान ० भए बी भन्दा पहिला ए हुन्छ । वा यदि कन्ट्रोल मान १ भए ए भन्दा पहिला बी हुन्छ ।
क्वान्टम फिजिक्समा सुपर पोजिसनमा बिट्स हुन सक्छ । जसको अर्थ यसको मान एउटै समयमा ० वा १ हुन्छ, यसकारण बिट्सको मान अपरिभाषित छ । वा कन्ट्रोलको अनिश्चित मानका कारण जुन क्रम तय हुन्छ, त्यो ए वा बी घटनाबीच अपरिभाषित क्रम हो । यसकारण भन्न सकिन्छ कि बीभन्दा पहिला ए पनि हुन सक्छ र एभन्दा पहिला बी पनि हुन सक्छ ।
क्वान्टम फिजिक्समा वास्तविकता फरक छ । यदि यी दुई भनाइ सत्य हुन सक्छ भने जसमा अपरिभाषित अस्थिर क्रमको रूप जान्न सकिन्छ । रोमेरोले बिबिसीसँग अनुसन्धानमा प्रकाशको कणमा देखिएको परिवर्तन एक प्रकाशीय धु्रवीकरणको गुणमा निर्भर रहने बताएका थिए ।
यस अनुसन्धानमा ए वा बीको आकारमा परिवर्तन भएपछि जुन क्रममा यो फेरिन्छ, त्यसले प्रकाशीय ध्रुवीकरण नियन्त्रित गर्दछ । आकार परिवर्तनको केही सम्भावना हुन्छ, यस रूपान्तरणको परस्परको समेत एक सीमा हुन्छ । यस सीमाको तोडेर क्वान्टम फिजिक्स ए वा बी का बीच एक अनिश्चित क्रम बन्छ ।
यो अनुसन्धान एक सिद्धान्तको प्रमाण हो । तर, उच्च स्तरमा कम्प्युटरको कार्य गुणस्तर वृद्धि गराउनमा यो बढी उपयोगी हुन्छ । रोमेरोका अनुसार अस्ट्रियामा भएको एक अनुसन्धानमा यही अनिश्चित क्रमको फाइदाको विषयलाई प्रदर्शन गरिएको थियो ।
उनले भनेका छन्, ‘एउटा अर्को उपलब्धिले मलाई धेरै उत्साहित बनाउँछ, जुन जुलियो किरिबेलाको सिद्धान्त हो । जसमा क्वान्टम स्विचको मद्दतबाट इन्टरफेसको च्यानलमा सञ्चार सम्भव रहेको छ ।’
उदाहरणका लागि टेलिफोन लाइनमा आउने स्वरमा श्रोता पूर्ण रूपमा भ्रममा पर्छन् । रोमेरो र उनका सहयोगीले आफ्नो अनुसन्धानलाई बुझाउनका लागि अन्डा वा कुखुराको विरोधाभास भनाइको प्रयोग गरे । अन्डा वा कुखुरा वास्तवमा एक बहसको विषय हो, यस अनुसन्धानले हामीलाई निश्चित रूपमा दुवै घटना पहिला हुन सक्ने बुझाउन प्रयास गरेको छ ।
यो अनुसन्धानमूलक लेख सोसाइटी अफ अमेरिकन फिजिक्स म्यागजिन फिजिकल रिभ्यु, जर्नल–अमेरिकन फिजिकल सोसाइटीमा प्रकाशित भएको थियो ।
दुई जनासित प्रेम, धोका नदिन दुवैसँग गरे विवाह !
भारतको छत्तिसगढको बस्तरमा एक जनाले एकै पटक दुई जनासित विवाह गरेका छन् । यो विवाह अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । ट...
जब घरमा पालेको बिरालोका कारण ‘प्रेग्नेन्ट’ भईन् श्रीमती !
हामीले दिनहुँ जसो नै अचम्मका खबर सुन्दै र पढ्दै आईरहेका होलाउँ । यस्तै एउटा घटना अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ...
महिलाको कुन-कुन अंगमा पर्छ पुरुषको कर्के नजर ?
काठमाडौं । पुरुषहरुको नजर ‘तिखो’ र ‘कर्के’ खालको हुन्छ भने महिलाको नजर ‘नहेरे झैँ’ र ‘साइम्बोलिक’ हुन्छ। आज हामी पुरुषले...
स्वास्थ्य रहन कुन उमेरमा कति घण्टा सुत्ने ?
स्वास्थ्य कायम राख्नका लागि पौष्टिक आहारका साथसाथै पर्याप्त निद्रा पनि आवश्यक हुन्छ । तर आजकल विभिन्न कारणवश मानिसहरू पर...
बुवासँग खेल्ने बालबालिकाको दिमाग हुन्छ तेज
सबै आमाबुवालाई आफ्ना बच्चाहरू प्यारा लाग्छन् । उनीहरू बच्चाबच्चीको स्वास्थ्यदेखि लिएर पढाइसम्म ध्यान दिन्छन् । हालै गरिए...
यस्तो ठाउँ जहाँ ब्वाईफ्रेन्ड भाडामै पाइन्छन्
जापानमा एउटा व्यवसाय सुरु भएको छ, जुन व्यवसायले जो कोहिलाई पनि अचम्ममा पार्न सक्छ । जापानमा ब्वाईफ्रेन्ड भाडामा पाईने नय...